चेतल्याण्ड: Jun 1, 2008
परिबर्तन भनेको क्षणक्षणमा हुने कुरा हो। आज जन्मेको बच्चा दिनदिनै अलि अलि बढ्दै गएर एकदिन जवान हुन्छ। समयले परिबर्तन गराएको भनौ अर्थात प्राक्रितिकले बनाएको भनौ। कतिपय कुराहरुको हामीले देख्नै नपाई, सुन्नै नपाई पनि परिबर्तन हुने गर्दछन्। खास गरि हामी मानब जाती झन परिबर्तनलाई चाहन्छौ। त्यसमा पनि हामी नेपाली त झनै।
धेरै कुराहरुको परिबर्तन भईसकेको छ र दिनदिनै भईराखेका छन। नेपालमा के ठुलो परिबर्तन भयो भनेर धेरैले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। भत्केको सडक झन भत्केको छ। बनाएका भवनहरु भत्काइका छन। इतिहासिक बस्तुहरुको संरक्षण गर्नुको सट्टामा तोडिएका छन। के बिग्रेको छ र? राष्ट्रको सम्पति राष्ट्रको पैशाले बनाए भईहाल्छ नि? बिगारेका कुराहरु किन राष्ट्रको पैशाले बनाउने? नबनाए देखि पछि अरुले चाँहि के भत्काउने त? एउटा सरकारले बनाउने, अर्कोले आएर भत्काउने। यो क्रम त जारि नै हुनु पर्यो नि। नत्र नेताहरु के गरि बसुन। बिचरा उनिहरुलाई न त जागिर नै छ न त पेन्सन नै। आम्दानि पनि चाहियो, देखाउनु पनि त पर्यो नि। डर र त्राश देखाएर भएपनि एकपटक कुर्चिमा बस्न पाए त देशको नभएपनि आफ्नो त परिबर्तन हुने निश्चित नै छ नि, हैन र?
संघिय गणतान्त्रिक नेपालमा पनि आज नेपालीहरुलाई ठुलो परिबर्तन चाहिएको छ। अबको परिबर्तन भनेको सिंहदरबारको मर्मत हैन, पानी चुहिने झुपडीको छाना मर्मत गर्नु पर्ने छ। बुलेट प्रुफ गाडीहरुको खोजी हैन सर्बसाधरण नेपाली जनताहरु बस चढ्न सकाउनु पर्ने परिबर्तन चाहिएको छ। ढोकाको आग्लो दह्रो भयो कि भएन भनेर त्राशले भरिएका नेपालीहरुलाई ढोका खुल्ला गरी पनि आनन्दले सुत्न पाउन सक्ने गराउनु परेको छ। कतिबेला सिंदुर र पोते पुछ्नु पर्ने हो, कतिबेला कपाल खौरनु पर्ने हो भनेर त्राशले भरिएका नेपालीहरुलाई शान्तिको ढोका खुल्ला गरिदिनु पर्ने छ।
संघिय गणतान्त्रिक नेपालमा हामीले त्यस्तो आशा राखेका छौ र हाम्रो आशा पुरा होस् भन्ने पनि कामना गर्दछौं।
चेतल्याण्ड साइबर काफे, भक्तपुर सल्लाघारि तिनकुनेबाट।
Posted by See Bee at 6:01 PM No comments: